Accueil > Gazetin'ny nosy > Gadra avoaka ny fonja: Mijaly ny vahoakan’i Mananara Avaratra
Gadra avoaka ny fonja: Mijaly ny vahoakan’i Mananara Avaratra
Velon-taraina ny mponina any Mananara Avaratra satria manao amboa ditsoka manohy ny asa ratsiny ary mbola mamaky trano sy mandroba fananan’olona amin’ny sehatra rehetra ny gadra any an-toerana. Tompon’andraikitra ny fonja any no mamoaka azy ireo ka mampanao izany asa maloto izany, hoy ny akom-baovao avy any an-toerana.
Hatramin’ny halatra lavanila no anirahana an’ireo gadra avoaka ny fonja, ka ahiana ny hivadihan’ny raharaha ho fitsaram-bahoaka. “Takianay ny handraisan’ny fitondram-panjakana foibe andraikitra fa maty sy mijaly izahay vahoaka”, hoy ny ako avy any an-toerana.
Depiote mamoa-tsampona: Tompon’andraikitra koa ny mpifidy
Saika ny ankamaroan’ny Malagasy ankehitriny no mahita sy mahatsapa fa Antenimierampirenena efa maty hasina tanteraka no misy eto amin’ity firenena ity, amin’izao fitondran’ny HVM izao. Maty hasina tanteraka ary tsy atokisan’ny vahoaka malagasy intsony noho ny antony maro. Voalohany aloha dia saika depiote jamban’ny vola na jamban’ny “malette” daholo no misy eny Tsimbazaza. Nibaribary izany hatrany am-piandohan’ity fitondrana Rajaonarimampianina ity, tamin’ny taona 2014. Isaka ny misy ny fandaniana volavolan-dalàna lehibe dia tsy maintsy mandeha ny fizaram-bola vao lany ilay lalàna. Eo koa ny fitakiana tombotsoa diso tafahoatra izay tsy ankasitrahan’ny vahoaka Malagasy, ny fandaniana volavolan-dalàna fahatany, ny famadihana palitao, ary indrindra indrindra fa ny toetra sy ny fihetsika ny sasany amin’ireo solombavambahoaka. Angamba tsy mila ampahatsiahivina intsony fa tsy nisy olona nilatsaka ho fidiana solombavambahoaka tamin’ny anaran’izany antoko HVM izany tamin’ny taona 2013, amin’izao fotoana anefa dia misy ny vondrona parlemantera HVM eo anivon’ny Antenimierampirenena ary ny solombavambahoaka mandrafitra izany vondrona parlemantera izany no maro an’isa. Araka ny efa voalaza tetsy ambony, antony iray lehibe mahatonga ny Antenimierampirenena ho maty hasina koa ny toetra sy ny fihetsika ny sasantsasany amin’ireto solombavambahoakan’i Madagasikara ireto. Raha mijery fotsiny isika ny zava-niseho teny Tsimbazaza, tao anatin’ny roa herinandro teo izay, dia niteraka resabe ny fihetsika mamohehatra izay nataon’ny depiote voafidy tany amin’ny distrikan’Isandra, Rabetafika Robertine. Mbola tsy nisy teo amin’ny tantaran’ity Madagasikara ity ny solombavambahoaka manala baraka ampahibemaso mpanao gazety toy ireny nataon’ny solombavambahoakan’Isandra ireny. Torak’izany koa ny fihetsika tsy mendrika ho an’ny olom-boafidy izay nataon’ny depiote voafidy tany Betroka, Nicolas Randrianasolo. Tsiahivina fa tany aloha tany dia efa saika nifanao totohondry teo amin’ny tokontanin’ny Antenimierampirenena ihany koa i Nicolas Randrianasolo sy i Naivo Raholdina, solombavambahoaka Mapar voafidy tetsy amin’ny boriborintany fahadimy. Maro moa ny fihetsika tsy misy famendrehana nataon’ireo depiote sasantsasany tao anatin’ity fitondran-dRaojanarimampianina ity izay tsy ho voatanisa eto avokoa. Ny zavatra iray tsy azo lavina anefa, tsy tonga ho azy teny Tsimbazaza ireo solombavambahoaka adala sy mamoa-tsampona ireo raha tsy nisy ny Malagasy nifidy azy tamin’ny fifidianana. Midika izany fa matoa maty hasina toy izao ny Antenimierampirenena eto amintsika dia tompon’andraikitra koa ny mpifidy izay nandany ireo depiote ireo tany amin’ny distrika misy azy. Marina fa mety ho voafitaka ireo Malagasy nifidy ireo depiote mamoa-tsampona ireo tamin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra kanefa tsy manala ny andraikitr’ireo mpifidy velively izany. Lesona ho an’ny Malagasy ny toe-javatra tahaka izao mba tsy hifidy olona fahatany na hifidy ireo kandida manolotra vary kely amin’ny kapoaka, T-shirt, sns sns, amin’ny fifidianana manaraka.